ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 40.2 နိုင်လင်း၏ နှလုံးသားနှင့် ကျွန်တော်ရေးခဲ့ရသော စာတစ်စောင်
40.2 နိုင်လင်း၏ နှလုံးသားနှင့် ကျွန်တော်ရေးခဲ့ရသော စာတစ်စောင်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀မှာ အငှားခံစားချက်နဲ့ သူများအတွက် ရည်းစားစာ နှစ်စောင် ကျွန်တော် ရေးပေးခဲ့ဖူးတယ်..။ ကျွန်တော်ရေးတာပဲ ကောင်းလို့လား၊ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်နှိုက်ကိုက ကြိုက်နေလို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး..။ တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့်စာနဲ့ အဆင်ပြေသွားပြီး အခုဆို သမီးလေးတစ်ယောက် နဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုတောင် ပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ..။
သူများအတွက် ရေးပေးတယ် ဆိုလို့ ပြီးစလွယ် ရေးပေးတယ် မထင်ကြနဲ့အုံး..။ အကူအညီတောင်းသူက ကျွန်တော့်ကို သူတို့ရဲ့အခြေအနေ အားလုံး တစ်လုံးမကျန် ပြန်ပြောပြရတယ်..။ ကောင်မလေးအပေါ်ထားတဲ့ ခံစားချက်၊ အတွေး၊ မျှော်လင့်ချက် တွေကအစပေါ့..။ အဲဒါတွေကို သေချာ နားထောင်၊သုံးသပ်ပြီးမှ ဆရာကြီး စတိုင်.. ဖီးလ်အပြည့်နဲ့ ကျွန်တော်က ခံစားသီကုံးတာ..။
ဆိုတော့.. ကျွန်တော့်စာတွေက ပေါ့သေးသေးတွေ မဟုတ်ဘူး..။ ခပ်လန်းလန်း တွေ..။
ဒါပေမယ့် မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ကိုယ်တိုင်တောင် ချွတ်မရ၊ဟောမရ၊ပြောမရ တဲ့ ပေကတ်ကတ် တွေ ရှိသေးတာဆိုတော့ နိုင်လင်းအတွက် ရေးပေးခဲ့တဲ့ စာကတော့ ပြန်စာလေးတောင် မရရှာခဲ့ပါဘူး..။
စာပေးလိုက်ပြီး တစ်ပတ်လည်း အကြောင်းမပြန် နှစ်ပတ်လည်း သတင်းမကြား ဆိုတော့ နိုင်လင်း က ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်..။
“ ယောက်ဖ.. သူကြိုက်ကြိုက်၊ မကြိုက်ကြိုက်.. မင်းရေးထားတာ ငါတော့ ကြိုက်တယ် ” တဲ့..။ ဟာကွာ လို့ ကျွန်တော့်မှာ ဖြစ်ရတယ်..။ ဟုတ်တယ်လေ..။ ကောင်မလေး ဆီကပြန်စာမရဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော်က နှစ်သိမ့်ရမှာ..။ သူက ကျွန်တော့်ကို ပြန်နှစ်သိမ့် နေတယ်..။ နိုင်လင်း ဆိုတာ အဲသလို သူငယ်ချင်း..။
ကျွန်တော် ပဉ္စမနှစ်တက်ဖို့ ရန်ကုန်ပြောင်းတော့.. ကျွန်တော့်အမအကြီးဆုံးက ရမည်းသင်းမှာ တာဝန်ကျနေခဲ့တယ်..။ အလုပ်က သူနာပြုဆိုတော့ သိပ်ကြီး ပိုပိုလျှံလျှံ မရှိပေမယ့် သူ့မောင် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီး အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ရမည်းသင်းကနေ ငွေလှမ်းပို့တယ်..။ ၀ိုင်အိုင်တီ main building ကြီးအောက် ကြော်ငြာဘုတ်မှာ ငွေလွှဲသတင်း ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို လာပြောတော့ ကျွန်တော့်မှာ အံ့သြတကြီး ဖြစ်ရတယ်..။
“ငါ့ဆီ ငွေပို့မယ့်သူ မရှိပါဘူး.. နောက်တာများလား ” ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပေါ့..။
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းများက “ ဟေး.. ဆမိတ်ခုံငွေလွှဲ ရောက်တယ်ကွ.. သွားဝါးကြမယ် ” လုပ်နေကြပြီမို့.. အံ့သြနေပေမယ့် ဇဝေဇ၀ါနဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့.. အဆောင်ကနေ.. main building အောက် ထွက်လာခဲ့ကြတယ်..။ နိုင်လင်း လည်း ပါတယ်..။ ဟိုရောက်တော့ ရမည်းသင်းကအမ က တကယ်လွှဲလိုက်တာ ဖြစ်နေတယ်..။ Amount က သုံးရာ..။
စားမယ်ဝါးမယ် ဆိုပြီး လိုက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ.. လွှဲငွေ သုံးရာဆိုတာကြည့်ပြီး ၀ိုင်းရယ်ကြတယ်..။ ငွေလွှဲ ဆိုရင် ထောင်ဂဏန်း၊ သောင်းဂဏန်း လွှဲလေ့ ရှိကြ တာမို့.. ကျွန်တော့်လွှဲငွေ သုံးရာက သူတို့အတွက် မကြုံစဖူး ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်..။ စိတ်ထဲမယ် ဘာရယ်ညာရယ် မရှိကြပေမယ့် တဟားဟား နဲ့ သူတို့မှာ ပြောမပြီး ရယ်မပြီး ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်..။
နိုင်လင်းကတော့.. “ ယောက်ဖ.. မင်းအမလည်း သူတတ်နိုင်တာ သူ ပို့လိုက်တာ နေမှာ ” ဆိုပြီး ကျွန်တော့်လက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ရင်း မရယ်မပြုံးဘဲ အားပေးစကား ဆိုတယ်..။ ကျန်သူငယ်ချင်းများ ရယ်ကြတာ.. စိတ်မကောင်းမဖြစ်မိပေမယ့် နိုင်လင်း အဲသလိုမျိုး ပြောခဲ့တာတော့ အခုထိ ကျေးဇူးတင်အမှတ်ရဆဲ ပါပဲ..။
Posted by navana at 4:37 PM
Labels: 40 မပြီးဆုံးနိုင်သော သူငယ်ချင်းများအကြောင်း အပိုင်းနှစ်
ဖတ်ပြီးရယ်ပဲ ရယ်ရမလို ၊ စိတ်မကောင်းပဲ ဖြစ်ရမလိုနဲ့
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့ အစ်ကိုရာ .. နော
He's reallyagood mate.
February 13, 2009 at 4:04 AM
Your friendship is so cute and warm.
ကိုယ့်လူဖော်တာနဲ့ ဟိုမှာ ကိုနိုင်လင်း နားရွက်အလိမ်ခံရကိန်းရှိတယ်။